Ukusasazeka Phantsi kweBroker Umthengisi-olona xabiso lubalaseleyo lokuRhweba ngeMali
Ikhaya / malunga / Kutheni iFXCC / ixesha ukusasazeka
Ukusasazeka yenye yeemeko eziphambili zokurhweba kunye nokutyala imali kwi-Forex. Kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni ukusasazeka kwe-Forex ukuba ufuna ukuthengisa kurhwebo lwangaphandle.
Ukusasazeka yindleko abathengisi abenza kuyo yonke intengiso. Ukuba ukusasazeka kuphezulu, kuyakubangela ukwanda kweendleko zokurhweba eziya kuthi ekugqibeleni zinciphise inzuzo. I-FXCC ngumrhwebi olawulwayo onika ukusasazeka okuqinileyo kubathengi bayo.
Yintoni esasazeka kwi-Forex?
Ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa leasethi.
Kwimarike yemali esemgangathweni, ukuthengiswa kwenziwa ngalo lonke ixesha, kodwa ukusasazeka akuhlali rhoqo kuzo zonke iindawo. Ukuqonda ukuba kutheni le nto isenzeka, kufanelekile ukuqonda umahluko phakathi kwamaxabiso okuthenga kunye nokuthengisa imali xa kuvavanywa ukuthengisa, ekwafumanisa ukuba yimarike.
Kwimarike yemasheya nakwi-Forex, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa. Ukusasazeka kwi-Forex ngumahluko phakathi kwexabiso lokubuza kunye nexabiso lokubhida.
Yintoni ibhidi, cela, kunye nokunxulumene nokusasazeka?
Zimbini iintlobo zamaxabiso kwintengiso:
Ibhidi-sisixa-mali asithenga ukuba asisebenzise umthengi.
Buza- ixabiso eliza kwamkelwa ngumthengisi weeasethi zemali.
Kwaye ukusasazeka ngumahluko phakathi 'kwebidi kunye nokubuza' okukhankanywe ngaphambili okwenzeka ngexesha lokuthengiselana. Umzekelo olungileyo wobudlelwane bemakethi esekuhleni kukubhida kwi-bazaar xa ixabiso eliphantsi libekwa phambili kwaye owesibini wentengiso ubambelela kwimfuno ephezulu.
Yintoni ukusasazeka kwe-Forex kwicala lomthengisi?
Ukusuka kwindawo yokujonga umrhwebi okwi-Intanethi, ukusasazeka kwe-Forex yenye yemithombo yengeniso ephambili, kunye nekhomishini kunye nokutshintsha.
Emva kokuba sifunde ukuba yintoni ukusasazeka kwi-Forex, masibone ukuba ibalwa njani.
Ukusasazeka kubalwa njani kwi-Forex?
Umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa ulinganiswa ngamanqaku okanye iipipi.
Kwi-Forex, umbhobho yidijithi yesine emva kwenqaku lokugqibela kwinqanaba lotshintshiselwano. Cinga ngomzekelo wethu wezinga lotshintshiselwano nge-euro 1.1234 / 1.1235. Umahluko phakathi konikezelo kunye nemfuno yi-0.0001.
Oko kukuthi, ukusasazeka ngumbhobho omnye.
Kwimarike yemasheya, ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lokhuseleko.
Ubungakanani bokusasazeka buyahluka kumthengisi ngamnye kunye nokuguquguquka kunye neevolumu ezinxulumene nesixhobo esithile.
Okona kuthengiswa kakhulu isibini lwangoku yi-EUR / USD kwaye ngesiqhelo, ukusasazeka okuphantsi kukwi-EUR / USD.
Ukusasazeka kunokulungiswa okanye kudadwe kwaye kuyalingana nomthamo obekwe kwintengiso.
Wonke umrhwebi okwi-Intanethi upapasha ukusasazeka okuqhelekileyo kwiphepha leeNgcaciso zekhontrakthi. Kwi-FXCC, ukusasazeka kunokubonwa 'ukusasazeka okuphakathiiphepha. Esi sisixhobo esikhethekileyo esibonisa imbali yokusasazeka. Abarhwebi banokubona ukusasazeka kweepikisi kunye nexesha lesipikha kwinto enye.
Umzekelo - ukubala njani ukusasazeka
Ubungakanani bokusasazeka okuhlawulwe nge-euro kuxhomekeke kubungakanani besivumelwano osithengisayo kunye nexabiso lepip ngesivumelwano ngasinye.
Ukuba sijonga ukubala ukusasazeka kwi-Forex, umzekelo, ixabiso lombhobho ngesivumelwano ngasinye ziiyunithi ezilishumi zemali yesibini. Ngokwemigaqo yedola, ixabiso li- $ 10.
Ixabiso leepip kunye nobukhulu bekhontrakthi ziyahluka ukusuka kubarhwebi ukuya kubroker- qiniseka ukuba uthelekisa iiparameter ezifanayo xa uthelekisa ukusasazeka okubini kunye nabarhwebi ababini abohlukeneyo.
Kwi-FXCC, ungasebenzisa ifayile ye- iakhawunti yeedemo ukubona ukusasazeka kwexesha lokwenyani eqongeni okanye ukubala ukusasazeka usebenzisa ikhaltyhuleyitha yorhwebo.
Izinto ezichaphazela ubungakanani bokusasazeka kwi-Forex
Zeziphi izinto ezichaphazela ukurhweba okusasazekayo?
Ubutywala besixhobo esona siphambili semali
Umthamo wokurhweba kwisixhobo semali
Ukusasazeka kweCFDs kunye ne-Forex kuxhomekeke kwisiseko seasethi. Okukhona iasethi ithengiswa ngokuthe ngcembe, kokukhona ulwelo luye kwiimarike zalo, kokukhona abadlali bakule marike, amathuba amancinci aya kuvela. Ukusasazeka kuphezulu kwiimarike ezingaphantsi kolwelo ezinje ngeemali ezingaqhelekanga.
Kuxhomekeka kunikezelo lomthengisi, unokubona ukusasazeka okungaguqukiyo okanye okungafaniyo. Kufuneka iqatshelwe into yokuba ukusasazeka okungagungqiyo kuhlala kungaqinisekiswanga ngabarhwebi ngexesha lokungazinzi kwemarike okanye izibhengezo zoqoqosho olukhulu.
Ukusasazeka kuyahluka ngokuxhomekeka kwiimeko zentengiso: ngexesha lesibhengezo esibalulekileyo, ukusasazeka ngokubanzi, kwaye uninzi lwabarhwebi aluqinisekisi ukusasazeka ngexesha lokwazisa kunye nexesha lokungazinzi.
Ukuba ucinga ngokuthengisa ngexesha lentlanganiso yeBhanki eNkulu yaseYurophu okanye ngelixa iFed inesibhengezo esibalulekileyo, ungalindeli ukuba ukusasazeka kufane njengesiqhelo.
Iakhawunti ye-Forex ngaphandle kokusasazeka
Ngaba uyazibuza ukuba kunokwenzeka ukuba urhwebe i-Forex ngaphandle kokusasazeka?
Iiakhawunti ze-ECN ziiakhawunti ezenziwa ngaphandle kokuthatha inxaxheba komthengisi. Unokusasazeka okuncinci kuphela kule akhawunti, umzekelo, i-0.1 - 0.2 iipips kwi-EUR / USD.
Abanye abathengisi bahlawulisa umrhumo osisigxina kwisivumelwano ngasinye esigqityiweyo kodwa iFXCC kuphela zihlawulisa kwaye akukho khomishini.
Ukusasazeka okusemgangathweni kwe-Forex, yintoni na?
Ukusasazeka okugqwesileyo kwimarike ye-Forex kukusasazeka kwe-interbank.
Ukusasazeka kwe-interbank forex kukusasazeka kweemarike zotshintshiselwano lwangaphandle kunye nokusasazeka phakathi kwexabiso le-BID kunye ne-ASK. Ukufikelela ekusasazeni kwe-interbank, kufuneka ube STP or Iakhawunti ye-ECN.
Ungakufumanisa njani ukusasazeka kwi-MT4?
Vula Iqonga lokuthengisa iMetaTrader 4, yiya kwicandelo le "Market Watch".
Unokufikelela kwiindlela ezimbini ezibandakanyiweyo ngokusisiseko kwiqonga lokuthengisa le-MT4:
Cofa ekunene kwindawo ekubukelwe kuyo kwintengiso kwaye ucofe ku "spread". Ukusasazeka kwexesha lokwenyani kuya kuqala ukuvela ecaleni kwebhidi kunye nexabiso lokucela.
Kwitshathi yokuthengisa ye-MT4, cofa ekunene kwaye ukhethe "Iipropathi," emva koko, kwiwindow evulayo, khetha ithebhu "Ngokubanzi", jonga ibhokisi esecaleni ko "bonisa umgca we-ASK," kwaye ucofe u- "Kulungile."
Yintoni ukusasazeka kwe-Forex-intsingiselo yokusasazeka kurhwebo?
Umrhwebi ngamnye uneqondo lakhe lobuntununtunu kwiindleko zokusasazeka.
Kuxhomekeke kwisicwangciso sokurhweba esisetyenzisiweyo.
Lincinci ixesha elibekiweyo kunye nenani elikhulu lentengiselwano, kokukhona kufuneka ulumke ngakumbi xa kufikwa ekusasazeni.
Ukuba ungumrhwebi oguqukayo ofuna ukuqokelela inani elikhulu leepip ngaphezulu kweeveki okanye kwinyanga, ubungakanani bokusasazeka abunampembelelo incinci kuwe xa kuthelekiswa nobungakanani beentshukumo. Kodwa ukuba ungumrhwebi wosuku okanye we-scalper, ubungakanani bokusasazeka bunokulingana umahluko phakathi kwenzuzo kunye nelahleko.
Ukuba uhlala ungena kwaye uphuma kwintengiso, iindleko zentengiselwano zinokongeza. Ukuba esi sisicwangciso sakho sokurhweba, kuya kufuneka ubeke iiodolo zakho xa ukusasazeka kufanelekile.